यस्ता छन् जाडोमा मेथीको साग खानुका फाइदा — Sanchar Kendra
यस्ता छन् जाडोमा मेथीको साग खानुका फाइदा
मौसमी फलफूल, सागसब्जी नै शरीरका लागि अनुकुल हुन्छ । किनभने यस्ता फलफूल, सागसब्जी त्यही बेला उत्पादन हुन्छन्, जतिबेला हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ । जस्तो कि, अहिले मेथीको साग । यो सिजनमा पाइने सागसब्जीमा एक हो मेथीको साग । विभिन्न स्वास्थ्यबद्र्धक गुणहरुका कारण मेथीको साग अत्यन्त लाभदायक मानिन्छ । मेथीका यी ११ फाइदा के छ त ?
आयुर्वेद अनुसार यसरी गर्नुहोस् स्वस्थ्य जीवनशैलीको अभ्यास
चिसोबाट बच्न मदिरा सेवन गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधान! जान सक्छ ज्यान
जाडोमा ओठ फुट्नबाट यसरी बचाउनुहोस्
जाडोमा अदुवा हालेको चिया पिउँदा स्वास्थ्यका लागि हुन्छन् यस्ता फाइदा
शारीरिक बनावटबाट असन्तुष्ट किशोरकिशोरीमा डिप्रेसनको समस्या